Ronaldinho oo ku dhow in uu Musalifo iyo Lacagta yar ee u Hartay oo la ogaadey Cadadkeeda? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Ronaldinho oo ku dhow in uu Musalifo iyo Lacagta yar ee u Hartay oo la ogaadey Cadadkeeda?
Published on November 6, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(06-11-2018) Cayaaryahankii hore ee kooxda Barcelona iyo AC Milan Ronaldinho ayaa ;lasheegayaa in uu qarka u saaranyahay in uu musalifo kadib markii ay ka dhamaatay lacagtii uu haystey isla Markaana ay ku dheceen Ganaaxyo kala duwan.
Ronaldinho oo ka mid ahaa Cayaartoydii ugu fiicneyd ee Caalamka soo martay ayaa lacadeeyey in hadda uu haysto oo kaliya lacag dhan €6m oo Bank u taala waxaana jirta in Ninkaan uu Galay dacwado ay ku soo oogtey dowlada dalka Braziil,
Ninkaan ayaa lasheegay in uu Magaalada Porto Alegre.ka dhistay Guryo waa weyn oo sharci daro ah dacwad dheer kadibna Maxkamad ayaa ku xukuntay in la bur buriyo gebi ahaantood taas oo uu ku qasaaray Lacag aad u fara badan.
Lacagta Ronaldinho kaga qasaartay dhulkaas ayaa lagu qiyaasay €187,000 waxaa kaloo ninkaan uu sameeyey Tumasho aad u farabadan uuna ku bixiyey lacag fara badan iyada oo dhawaan lafilayo in uu galo Xaalad deg deg ah maadaama uu haysto €6m oo kaliya iyo lacag yar oo aan badnayn oo uu deyn ahaan u siiyey Walaakiis.
Kooxda Barcelona ayaa dhawaan u magacaawday Wakiilka kooxdaas ee Laatiin America balse waxay bilaabeen in ay ka fiirsadaan kadib markii uu lugaha lagalay Siyaasada Braziil dhawaana uu Taageeray Mid ka mid ah Musharixiintii u tartantay Madaxweynaha Braziil.
Ronaldinho oo Horay ugu soo Cayaaray kooxda Barcelona ayaa mudo 2 Sano bar ah u dheelayey kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga kadibna Braziil ayuu ku laabtay waxaana uu u Cayaaray kooxaha Atlético Mineiro, Querétaro iyo Fluminense.